XOG+WARBIXIN: Xaaladda Siyaasadeed ee Muqdisho oo kacsan, Xisbiyada Siyaasadda oo kacay! – Puntlandtimes
XOG+WARBIXIN: Xaaladda Siyaasadeed ee Muqdisho oo kacsan, Xisbiyada Siyaasadda oo kacay!
MUQDISHO(P-TIMES) – In ka badan 4 Urur Siyaasadeed iyo Kudladda baarlamaanka ee HORUSOCOD oo ay ku jiraan Xildhibaano katirsan labada Aqal ee hadda iyo madax hore ayaa si adag uga jawaabay qeylo dhaan kasoo yeertay Madaxda dawlad gobaleedyada ee Soomaaliya, taas oo ay ku dhaliilayeen Dawladda Faderaalku in ay sameysay talaabooyin hareer-marsan dawladnimada dalka.
Ururada Siyaasadeed & Kudlada barlamaanka Faderaalka Soomaaliya, waxay muujiyeen welwelka ay ka qabaan arrimaha aan waxba laga qaban ee Amniga, Siyaasadda, La dagaalanka Al- Shabaab, Doorashada iyo qorshaha guracan ee ay wadaan madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Madashu waxay qirtay in la siyaasadeeyey dhamaan howlaha Hay’addaha madax banaan ee dalka, gaar ahaana Hanti Dhawrka, Maxkamaddaha iyo Xeer Ilaaliyaha guud ee dalka, taas oo halis galinaysa daganaanshaha dalka iyo isla xisaabtam dhameystiran.